डिप्रेसन रोक्न के गर्ने? – Health Post Nepal
२०७७ असार ११ गते ६:२३
किन मानिसले आत्महत्या गर्छ?
सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्दछ। विशेष गरेर भिटामिन ‘सी’ प्राप्त हुने खानेकुरा सेवन, घाम ताप्ने जस्ता गर्यौं भने रोग क्षमता बढाउँछ। दैनिक योगा, व्यायाम गर्दा हाम्रो शरीरभित्र उत्पन्न हुने नकारात्मक हर्मोन नियन्त्रणमा ल्याउँछ।
सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि राष्ट्रिय रणनीति ल्याउनुपर्छ।
(स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार बोलेको भनाइमा आधारित)
डा. सरोज वझा